မျှော်လင့်ရင်ခုန်စွာ. . ကုန်းတစ်တန်. . လေတစ်တန် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး. . .အွန်လိုင်းချစ်သူနဲ့ အတွေ့ ငုတ်တုတ်မေ့ တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် - Update News
December 2, 2020 December 2, 2020 - by Best_admin
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူမှုကွန်ယက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုဟာ ကမ႓ာတလွှားက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း သုံးစွဲကြပြီး မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တိုးကာ ဘဝအတွက် အထောက်အကူတွေရပြီး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေချောမွေ့သူတွေ ရှိလာကြသလို
အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက်များမှာ အသိအမြင် ဗဟုသုတ များစွာရစေသလို အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေတွေ တိုးနိုင်သကဲ့သို့ ချစ်ခင်ရသူ လက်တွဲဖေါ်နဲ့လည်း တွေ့နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့်. . . အဆိုးအကောင်းဟာ အမြဲဒွန်တွဲနေတတ်ကြတာ ဓမ္မတာ သဘာဝပေပဲမို့. လူမူကွန်ယက်အင်တာနက် အွန်လိုင်းပေါ်က အလိမ်အညာတွေ မိခဲ့ကြသူတွေလည်း ကမ႓ာအနှံ့မှာ လူပေါင်းများစွာမှ တကယ့်ကို အများအပြားပဲ ရှိနေခဲ့ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်က မိတ်ဆွေတု မိတ်ဆွေယောင်တွေကို မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန်ဟု ယူဆ ပေါင်းသင်း ချေးငှားယုံကြည်မိခဲ့ရာမှ ဘဝပျက်ခဲ့ရသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး ဖြစ်နေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
တွေ့ခွင့်ရတော့မယ် ဆိုပြီး ပျော်မြူးကာ ခရီးစဉ်တလျှောက် ရင်ဖိုကာ စိတ်လှုပ်ရှား ၊ ချစ်ကြည်နူးပြီး ပြောဖို့ စကားတွေ တွေးရင်း မျှော်လင့်ခဲ့ရသမျှ ချစ်ရသော ကောင်မလေးနဲ့ အတွေ့မှာ ကမ႓ာတစ်ခုလုံး ပြိုကျ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ ပြာကျခဲ့ရပါတော့တယ်။
ကောင်လေးခမျာ သူဟာ နဂိုရှိရင်းစွဲ ချောမောတဲ့ ရုပ်ရည်အတိုင်း အွန်လိုင်း အသုံးပြုခဲ့သလို သူရဲ့ အွန်လိုင်းချစ်သူ မိန်းမချောလေးဟာလည်း နဂိုပုံစံ အရှိအတိုင်းသာပဲလို့ ထင်မှတ်ခဲ့ရှာတာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကောင်လေးလည်း မျက်ရည်နဲ့ မျက်ခွဲ လာရာလမ်း ခရီးအဝေးကြီးကို စိတ်ပျက်လက်ပျက်ပဲ ပြန်သွားခဲ့ရသလို ကောင်မလေးမှာလည်း ရုပ်ရည်ကို ပြုပြင် လိမ်ညာမိခဲ့တဲ့ အပြစ်နဲ့ ချစ်ရသူနဲ့ ကွေ့ကွင်းကာ လေဆိပ်မှာပဲ အရူးတစ်ပိုင်း အသည်းဟက်တတ်ကွဲကာ ကျန်နေရစ်ခဲ့ရ ရှာပါတော့တယ်။
Previous Article ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ
Next Article အဖြစ်များဆုံး လေးဘက်နာ အတွက် သဘာဝ ဆေးကောင်း တစ်လက်
ဒီဇင်ဘာ (၂၄)ရက်မှ ၊ (၃၁)ရက်အတွင်းဆောင်ရန် ၊ ရှောင်ရန် ၊ သတိပြုရန် ၊ ယတြာပြုရန် (၁)ပတ်စာ ဟောစာတမ်း